Forum serasera malagasy Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna faharoa - Dinika forum.serasera.org
Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna faharoa
Fitohizan'ny hafatra : Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna faharoa
Nehemiah - 23/07/2013 08:20
T@ Nôvambra 1999, nilaza i National Geographic fa nahita ny chaînon manquant mampifanohy ny evôlisionan'ny dinôzôra sy ny vorona, dia ny Archeoraptor. Toy izao ny endriny t@ pejy voalohany :
Misy mihitsy eo ambanin'ilay sary hoe : "Azontsika atao ny milaza fa théropodes [karazan-dinôzôra mpihinan-kena misy ny T-Rex sy ny velociraptor] ny vorona, tahaky ny filazantsika fa biby mampinono ny olombelona."
Rehefa mandeha @ gargoty izany ianareo @ manaraka dia aza mangataka akoho sôsy intsony fa dinôzôra sosy :p .
Indrisy fa mandringa loatra ilay fikarohana ka notsipahin'ny ampahan'ny fianakaviamben'ny manam-pahaizana.
Farany dia namoaka lahatsoratra kely balitika @ tapany serasera izay miaiky fa misy olana ny Archeoraptor ny National Geographic (dia gaga ianao).
Ny antony nieritreretana azy ho chaînon manquant anelanelan'ny dinôzôra sy ny vorona dia ilay izy nanana vatan-dinôzôra sy rambom-borona. Kanefa ny tena marina dia nanakambana fôsilin-dinôzôra 1 sy fôsilim-borona 1 ilay mpamboly Sinoa nivarotra an'ilay izy.
Izao no lazain'i Larry Martin, mpampianatra @ oniversten'i Kansas mitsikera mafy ny dôgman'ny dinôzôra-zary-vorona @ lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "F is for fake" t@ New Scientist t@ 19/2/2000 :
Tsy mahatoky an'ireny santionany ireny aho raha voa tsy nahita ny sary rayons X [...] Tsy mihevitra an'ilay izy ho diso ny mpamboly, fa ny fiheverany azy dia toy ny fanamboarana objet d'art mba ho mora amidy kokoa. Lasa difotry ny hosoka ny tsenan'ny fôsily.
Izany hoe lasa bizina be izay tsy mikaroka ny fahamarinana intsony fa miezaka ny hahafa-po ny fironana evôlisionistan'ny olona ilay izy !
Nehemiah - 23/07/2013 08:22
Ity no rohy mankany @ fizaràna voalohany ho an'izay liana
Miharena - 23/07/2013 12:16
Mety ho fake tokoa ny resaka toy itony namana Neheniah raha toa ka atao fikarohana ireo sisam-biby fotsiny fa ny mety kokoa dia ny manao ny fikarohana zenetika hahafahana mampifandray ny karazana isanisany.
Ny fanontaniana fotsiny amin'ny namana dia hoe raha mitsipaka ny evolisionisma ianao dia heverinao ve fa avy hatrany dia teo daholo ny karazana misy ankehitriny fa tsy nisy fifanesem-pisehoana teto ambonin'ny tany? Izany hoe tamin'ny andron'i Noah ihany no nisy ny prototype feno momba ny biby ohatra ve?
Nehemiah - 23/07/2013 15:02
Aiza izay ADN anaovana an'izay ? Tsy hahita ADN feno @ fôsily mihitsy ianao : môlekiola mora lo ilay izy, raha tsy izay ve dia tsy efa nisy nanan-kevitra hanao an'izay ?
Na dia ny karazan-javaboary misy ankehitriny dia manahirana (ho an'ny mpandala evôlisiona) rehefa ampiharina izay tetika izay : oh. rehefa zohina ny cytochrome C-n'ny zavaboary maro, tsikaritra fa 64-69% ny fahasamihafan'ny cytochrome C-n'ny mikrôba (izay prokaryote) sy ny eukaryotes isan-karazany tahaky ny leviora, ny varimbazaha, ny voromahailala ary ny soavaly.
Raha marina ny fotopisainan'ny evôlisiona dia tsy tokony ahitàna karazan-javaboary anelanelanan'ny prokaryotes sy ny eukaryotes ve ? Torak'izay koa tsy tokony ho lehibe kokoa ny fahasamihafan'ny mikrôba sy ny soavaly (izay "mivoatra" bebe kokoa) noho ny fahasamihafan'ny mikrôba sy ny leviora (izay tsy dia "mifanalavitra" @ mikrôba raha ny tantaran'ny fivoaran'ny zavaboary araky ny fotopisainan'ny evôlisiona no jerena) ?
Torak'izay koa ny lolon-dandy rehefa ampitahaina @ biby manana hazon-damosina isan-karazany tahaky ny lamproie, carpe, sokatra, voromahailala sy soavaly : 27-30% ny fahasamihafàna, kanefa tokony ny soavaly no samihafa bebe kokoa noho ny lamproie.
Torak'izay koa rehefa ampitahaina ny globine-n'ny lamproie sy ny	carpe, sahona, akoho, kangourou sy olombelona : 73-81%, kanefa tokony samihafa kokoa ny an'ny olombelona noho ny an'ny carpe.
Rehefa ampitahaina indray ny cytochrome-C-n'ny carpe @ saobakaka, ny sokatra, ny akoho, ny bitro sy ny soavaly dia samy mitovitovy ihany : 13-14%. Tsy hita popoka mihitsy izay "transition" trondro-->amphibien-->reptile-->vorona sy biby mampinono izay dôgman'ny evôlisiona.
Miharena Ny fanontaniana fotsiny amin'ny namana dia hoe raha mitsipaka ny evolisionisma ianao dia heverinao ve fa avy hatrany dia teo daholo ny karazana misy ankehitriny fa tsy nisy fifanesem-pisehoana teto ambonin'ny tany? Izany hoe tamin'ny andron'i Noah ihany no nisy ny prototype feno momba ny biby ohatra ve?
Rariny izao fanontaniana izao ary manome occasion ahy hitsara ny fiheveran-diso momba ny mpandala ny famoronana izay raiki-tapisaka @ sain'ny maro.
Misy milaza fa ny mpandala ny fahariana dia mino fa noforonin'Andriamanitra araky endriny ankehitriny ny zavaboary rehetra fa tsy marina izany. Tsy misy inona na inona mifanohitra ny spéciation mihitsy @ Baiboly, fa voa mainka mifanaraka @ tontolo ianjadian'ny fahalovana noho ny fahalavoana : nanana hétérozygosité be ny karazan-javaboary voalohany noforonin'Andriamanitra, oh. i Adama sy Eva izay efa nanana ny fototarazo iterahana olona mainty volo na mena volo na mavo volo, fotsy hoditra na zarazara hoditra na mainty hoditra, sns. Arakaraky ny tontolo niainan'ny sasany dia nanjary nisy spéciation sy diversification, nefa ny spéciation dia fahaverezana fototarazo, @ alalan'ny sampona (izay fahasimban'ny fototarazo) sy ny dérive génétique. Izay no mahatonga ny cotons de Tuléar tsy miteraka bergers allemands mihitsy raha tsy ampiarahana @ bergers allemands. Nefa samy alika ireto races ireto.
Ny karazan-javaboary ankehitriny dia taranaky ny karazan-javaboary noforonin'Andriamanitra t@ fiandohan'izao tontolo izao. Ny karazam-biby manana hazon-damosina mivelona ety ambony tanety ankehitriny koa dia taranaky ny biby izay nentin'i Noa @ Sambofiarany.
Tsindrio ity rohy ity ary jereo ny hafatra 2 voalohany raha te-hahalala bebe kokoa momba an'izay ianao.
Miharena - 23/07/2013 17:56
Izaho indray dia tsy miombon-kevitra amin'ilay hoe misy fahasamihafana be dia be eo amin'ny cyt C amin'ny iray karazana hahafahana milaza fa tsy mahomby ny fampitahana karazana samihafa. MIsy ireo atao hoe marika tsara atao fampitahana raha hijery karazana samihafa sy ny fifandraisany ara-tarazo hilazana fa ny iray dia avy amin'ny iray hafa karazana.
Ohatra : maro ny karazana sahona ary ts ymifampiteraka izy ireo fa samy amin'ny karazany avy ihany.
Ny olombeona dia mbola tsy azo lazaina fa mitovy amin'ny biby maro karazana. Ary ny fampitahana ny isam-bondrona ara-tarazo dia hahafahana hatrany mahita hoe misy ny fifandraisany eo amin'y hoe iza no taloha ary inona no tarazo mampifandray azy.
Nehemiah - 24/07/2013 08:25
Ie, resaka mahaliana izany ^_^. Satria mantsy ny zavatra lazainao dia tsy mifanohitra @ fitantaran'ny Genesisy hoe noforonina ary miteraka samy araka ny karazany avy ny karazan-javaboary rehetra t@ Famoronana.
Averiko indray mandeha fa ny karazana @ Baiboly dia tsy mitovy @ karazana ara-tsiansa @fanasokajian'i Linné. Ohatra, afaka manan-janaka ny liona, ny tigra, ny léopard ary ny jaguar, midika izany fa taranaky ny karazana 1 monja niakatra t@ Sambofiara izy ireo.
Kanefa, tsy midika izany tsy akory fa taranaky ny karazan-javaboary 1 monja (izany hoe ny mikrôba) ny karazan-javaboary rehetra, tsy manaporofo mihitsy ilay izy fa niteraka sahona sy liona ny mikrôba.
Ny an'ny mpandala evôlisiona izany dia miendrika "hazon'ny fiainana" ny tetiaran'ny zavaboary rehetra. Toy izao ny fahitan'i Darwin azy :
Ankehitriny dia mitovitovy kokoa @'ity ilay izy :
Fa ny an'ny mpandala ny famoronana ara-Baiboly dia toy izao indray ny tetiaran'ny fiainana, izay miendrika "espalier" :
Miharena Ny olombeona dia mbola tsy azo lazaina fa mitovy amin'ny biby maro karazana. Ary ny fampitahana ny isam-bondrona ara-tarazo dia hahafahana hatrany mahita hoe misy ny fifandraisany eo amin'y hoe iza no taloha ary inona no tarazo mampifandray azy.
Inona no tetika ao an-tsainao ahafahana manao an'izay, raha tsy mandiso aho ?
Nehemiah - 24/07/2013 08:51
Ity ary ny rohy mankany @ fizaràna manaraka :
Miharena - 24/07/2013 09:22
Tsy hoe mandiso anao akory fa mapahatsiaro hoe sao dia diso famelabelarana ianao raha tsy feno ny zavatra lazainao. Ohatra iray io resaka marika hahafantarana ny fifandraisan'ny samihafa karazana io vokatry ny fikarohana izay zavamisy. Tsy hoe ny fehezanteny iray ao anaty Baiboly dia mahazava ny zava-drehetra fa mijery ny zava-misy azo refesina isika matoa mamoaka fehin-kevitra iray momba ny fivoaran'ny zavamananaina ohatra.
Raha toa moa ianao milaza fa ny tantaran'ny Baiboly no hoporofoinao amin'ny famelabelarana dia mila jerena avokoa ny lafiny rehetra mba tsy ilazàna fotsiny hoe tsy antapitrisan-taona io fitrangan-javatra nahatonga ny fivoarana ankehitriny izao.
Ny zavatra azo antoka fotsiny manko dia tokony iaraha-manaiky fa misy ny firoboroboan'ny zavamananaina sy ny erana misy azy fa tsy tonga dia indray mipoaka dia teo daholo ny rindran'ny zava-drehetra. Izany hoe misy otrika ary io otrika io no miroborobo araka ny lalàna misy ao anatiny (ADN ohatra dia isan'ny otrika tena azo raisina eo amin'n yara-materialy) fa eo amin'n yrindr ara-pamolavolana kosa dia midtira an-tsehatra ny Mpahary.
Nehemiah - 24/07/2013 10:26
Eny e, azoazoko ny tianao tenenina, ary izay koa no nahatonga ahy hametraka an'ity fanazavàna ity.
Ny Baiboly no ankina faratampon'ny kristiana, ka tsy maintsy io no niaingàna. Kanefa tsy ampy ny milaza hoe "Izay no sitra-pon'Andriamanitra" fa manjary tsy misy fikarohana vanona. Satria ny Baiboly ihany no milaza fa tontolo mirindra manaraka lalàna efa voapetraka sady tsy miovaova no noforonin'Andriamanitra, ary manana zo sy andraikitra hamakafaka an'ireny lalàna ireny ny olombelona.
Nohon'izany tsy tokony hampiditra fahagagàna any @'izay tsy ilazan'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa misy fahagagàna ny mpikaroka kristiana, fa tsy maintsy mitady vahaolana natoraly hatrany (izany akory tsy midika fa hirona @ naturalisme hoe tsy misy ny fahagagàna ny kristiana ). Raha nahatsikaritra ianao dia tsy nisy inona inona nampidiriko izay tsy nolazain'ny Baiboly mazava tsara na tsoa-kevitra avy @ filazan'ny Baiboly omban'ny fikarohana ara-tsiansa ireny lohahevitra momba ny fandalàna ny fahariana napetrako hatrizay.
Marina ny filazanao fa tsy tonga dia indray mipoaka dia teo daholo ny zavaboary rehetra araky ny ahitantsika azy, ary efa nazavaiko etsy ambony fa zavatra tena misy sy hita maso tokoa ny spéciation (misy ny sasany miantso azy hoe "microévolution" fa tsy dia tiako loatra izay voambolana izay satria tsy nisy inona na inona nivoatra teo, fa ny fahaverazana antontan-kevitra ara-pototarazo no zavatra nitranga mba hiteraka spéciation), nefa averiko indray mandeha fa tsy mba io no hanova ny mikrôba ho olombelona araky ny filazan'ny néo-darwinisme.
Marina aloha fa tsy ampy ny famelabelarana an'ilay lohahevitra ataoko e... Misy olona mantsy @ vahoaka izay efa vonona ny hanipaka ny fotopisainana mandrava finoan'ny evôlisiona ka mandray ny Baiboly ho marina manomboka @ Gen. 1 ka hatr@ Ap. 22:21, fa tsy mahasahy manao an'izay satria izay no fomba fijerin'izao tontolo izao nananany hatrizay ka tsy maintsy soloina fomba fijerin'izao tontolo izao mahomby, mifandraika tsara @ zava-misy ary tsy mandringa, satria be dia be ny fanontanian'ny olona @'izay.
Kanefa voafehin'ny fotoanako malalaka aho, mbola ho lavitr'ezaka ilay ezaka. Indray androany dia tokony akambako ho blaogy 1 izy rehetra, sa ahoana hoy ianao ?
Miharena - 24/07/2013 11:19
Ilay blaogy no mety kokoa angamba! dia any no mameno hoe iza no tsy mifandraika, indrindra ny hoe iza marin ano te-hanipaka an'iza, sy ny hoe sao mifandrindra ihany izy ireo!!